သောက်ရူး အေးမောင် | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » သောက်ရူး အေးမောင်	3
- ဘင်္ဂါလီ တစ်ဦး
Posted by ဘင်္ဂါလီ တစ်ဦး on Jun 28, 2012 in Creative Writing, Think Different |3comments
ရခိုင်တိုးလို့ ခေါ်နေတဲ့(RNDP)ပါတီက ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောထား
~လတ်တလော ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အဓိကရုဏ်းများကြောင့် ဘင်္ဂါလီများနှင့်ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများကို
နေရာခွဲ၍ ချထားကြောင်း၊နောက်ပိုင်းတွင် ဘင်္ဂါလီများကို တတိယနိုင်ငံများမှခေါ်ယူသွင်းသင့်ကြောင်း
~ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ မြို့ ၊ရွာများတွင် ဘင်္ဂါလီနှင့် ရောနှောနေထိုင်ခြင်းမရှိရအောင် စီစဉ်ရန်လိုအပ်ကြေ
ာင်း။စသည်ဖြင့် ရသလောက်မှတ်မိသရွေ့ ပြန်ရေးချလိုက်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအခင်းတွင် လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ ဖိနှိပ်နေသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ဘာသာခြား
များ(မရမာကြီး၊ကမန်၊ဘင်္ဂါလီ) ဟိန္ဒူများနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများအပြား ဒုက္ခပေးခံနေရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ဘိုးဘေး များလက်ထက် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ကျော်ကပင်နေထိုင်လာသည်မှာ
အနှိမ်ခံ ဘဝသာသာပင်ဖြစ်သည်။ဘယ်သောအခါမျှ နိုင်လိုမင်းထက်မပြုမူဖူးပါခင်များ။
အိုးပစ်၊အိမ်ပစ် ပြေးလွှားနေရသော ကျွန်ုပ်တို့ ကို အကူအညီပေးရန် လာရောက်လိုသူများကိုလဲ အမျိုးမျိုး
နှောင့်ယှက် ဟန့် တားနေသည်ကို မိတ်ဆွေတို့ မသိကြ၊မကြားကြပါလော။
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့၊ရမ်းဗြဲ၊ရသေ့တောင်၊စစ်တွေမြို့များတွင် အဓိကကြိုးကိုင် စေခိုင်းသော
ရခိုင်တိုးတက်ရေးပါတီမှ ပါတီဝင်(၄)ဦးကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်သည်။ ရခိုင်တိုးတက်ရေးပါတီမှ
ဦးဆောင်၍ တောင်ကုတ်မြို့ အကြမ်းဖက်မှုသည် အင်အယ်ဒီမှ လုပ်သည်ဟု သတင်းလွှင့်လျှက် ပါတီဆိုင်း
ဘုတ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ဒေါ်စုနှင့် နာယက ဦးတင်ဦး ပုံတို့ ကိုမီးရှို့ ခြင်း၊မြေပေါ်တွင် ချ၍ဖနောင့်တိုက် နင်းခြေခြင်းတို့ အပြင် ပါတီမှ. ထုတ်ဝေသော ဒီလှိုင်းဂျာနယ်ကို လုံးဝ အားပေးခြင်း မပြုတော့ကြောင်း
ပါတီ ဗဟိုထိ တိုင်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
ယခု ရက်ပိုင်းတွင် ပြည်တွင်းပြည် သတင်းမီဒီယာတို့ နှင့် ပါတီအချို့ သည် ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုကို ဦးတည်
သော ထုတ်ပြန်ချက်များ၊တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်းများ ပြုလုပ်၍ နိုင်ငံ မငြိမ်အောင် လှုံဆော်သည်ဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ဒေါက်တာ အေးမောင်ဦးဆောင်သောRNDP ကိုရည်ရွယ်၍
သတိပေးလိုက်သည်။RNDPသည် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို ကိုယ်စားမပြုသလို၊ပါတီ၏ လုပ်ဆောင်
ချက်များသည် ပြည်နယ်အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်ထက် ဆူပူအောင် တွန်းအားပေးနေသည်က
About ဘင်္ဂါလီ တစ်ဦး
ဘင်္ဂါလီ တစ်ဦး has written 1 post in this blog.
View all posts by ဘင်္ဂါလီ တစ်ဦး →	Blog
ko khin kha says: အရူးအေးမောင်လို့ ယဉ်ကျေးစွာခေါင်စဉ်တပ်သင့်ပါတယ်။
Was this answer helpful?LikeDislike 6
ကုလား ကြီး says: အေး ငါတို့ နေလာတဲ့နှစ်တွေ ကြာပီဝေး။-ီးလိုလို၊မှိုလိုလို ကောင်တွေက
ဟို ပို့ မယ်လေး၊ဒီပို့ မယ်လေးနဲ့ ။ထောက်ခံတယ်ကွာ ငါလည်း အမေရိကန်
ရောက်ဖူးချင်နေတာ။ရိုဟင်ဂျာတွေ ကမ္ဘာမှာ နာမည်ကောင်းရနေတာကို
ဘင်္ဂါလီ တစ်ဦး says: မိတ်ဆွေ ခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။
ထားရာမှာနေ၊စေရာ သွားရအောင် ကျွန်တေီ မ
Was this answer helpful?LikeDislike My Points	You need to be logged in to view your points.
Comments By Postမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - Mလုလင် - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - Ma Ma - uncle gyiအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - garuda - Ma Maဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - phoe cho - phoe choကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - uncle gyi - KZအတ္တဆန် - uncle gyi - Ma Maရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - uncle gyi - KZမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - uncle gyi - KZယုံလား? - uncle gyi - KZပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - TNA - မောင် ပေ``ကျန်းမာရေးအတွက် အရက် နဲ့ အုန်းသီး(အုန်းရည်) အသုံးဝင်ပုံ´´ - KZ - TNAကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - TNA - မောင် ပေကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAသူ - ရွှေ ကြည် - KZနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Shwe Ei - Shwe Eiမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - အရီးခင်လတ် - KZဖိုင်နယ်ပွဲ မှာ ပိုင်ရှယ်ဆွဲ (၂၅၇၄) - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ ...... မဟာဆန်.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သန္ဓေသားအတွက် အဟာရ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - Foreign Resident - parlayar 46မင်္ဂလာပါ - ဘဲဥ - jujumaEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77775 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67212 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66703 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58176 Kyats )MaMa (57665 Kyats )Top Posts & Pagesမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ်